Somaliland oo ka hortimid go’aanka Dowladda Somaliya ku joojisay qaadka Kenya – idalenews.com
Hargeysa(INO)- Somaliland, ayaa Dowladda Somaliya ku gacan-seyrtay go’aankii maanta ka soo baxay, ee ku shaacisay in ay si ku meel gaar ihi dalka oo dhan uga joojisay qaadka laga keeno dalka Kenya.
Wasiirka Duulista Hawada Somaliland, Farxaan Aadan Haybe, ayaa waxaa uu sheegay inaanu go’aankaasi khusaynin Somaliland, isla-markaana uu ku gaar yahay Dowladda Federaalka.
Wasiirka, ayaa sheegay in diyaaradaha qaadka ay si caadi ah u adeegsan karayaan garoomada ku yaala Deegaanada Somaliland, qaadkana ay keeni karaan.
Wasiirka oo la hadlay Warbaahinta, ayaa ku celiyay in diyaaradaha qaadka ka keena dalka Kenya, ay sidoodii caadiga ahaa u imaan karaan Somaliland, sida uu yiri.
Wasiirka Gaadiidka & Duulista Hawada Somaliya, Cali Axmed Jaamac (Jangeli), ayaa sheegay laga bilaabo berrito oo taariikhdu ku beegan tahay 6-da bishan, aanay diyaaraduhu qaadka keeni karin magaalooyinka dalka.
Maxamed Cali oo ka mid ah guddiga ganacsatada qaadka, ayaa sheegay inaysan jirin wax sabab ah oo Dowladda Somaliya ay u sheegtay, marka laga soo taggo in lagu wargeliyay inaysan dalka keeni karin qaadkii, ay ka keeni jireen Kenya.
Maalin kasta waxaa Somaliya ka soo degga 16 diyaaradood oo qaad sida, waxaana Somaliya lagu tilmaamay suuqa ugu wayn ee loo iib geeyo qaadka Kenya, ka dib markii Britain ay dalkeeda ka mamnuucday qaadka.
Dhageyso+Sawiro: RW CCC Oo Sir Badan Sheegay Xilli Uu Murashaxnimadiisa Maanta Shaacinayey